HP Laserjet 1160 / 1320 Printer Service Manual ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
HP Laserjet 1160 /1320 ​အ​တွက် Service Manual ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့​နေ​ရာ ​က​နေ​သာ Download ​လုပ်​ကြ​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​နဲ​နဲ​သက်​သာ​လာ​လို့ ​ဆိုက်​ဖက်​ကို ​ပြန်​လှည့်​လိုက်​တာ . ​လာ​ဖတ်​တဲ့ ​သူ​တွေ​ကို​လဲ ​အ​ဟောင်း​တွေ​ချည်း​ပဲ ​နေ့​တိုင်း ​တွေ့​နေ​ရ​ရင် ​ငြီး​ငွေ့​မှာ ​စိုး​လို့ . ​အ​သစ်​လေး​တွေ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အား​လုံး​ကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် .